The Take Of Semalt On Iwebhusayithi Ukuqeda: Yini Okudingeka Ukwazi
Ukuthola izixhumanisi kusuka kumakhasimende akho angahle kungcono kunokuba uthathe izixhumanisikusuka kumncintiswaneni wakho. Asikho isidingo sokukhathazeka uma umncintiswana wakho ekushiya ngokulandela i-rankings. Ukuthatha imikhuba yakho ye-SEOelinye izinga lizokuyisa endaweni yakho evamile. Ukudala okuqukethwe okusha nokunikeza umugqa omuhle wezinsizakalo nemikhiqizo eyakhoabancintisana abanganikeli bazokwenza okuhle kakhulu.
u-Igor Gamanenko, isazi esiholela phambili i-Semalt Amasevisi weDivaysi, uchaza ukuthi yikuphi ukukhishwa kwewebhu nokuphepha.
Namuhla, i-Google search algorithm inendlela yokuthola ikhophi-okuqukethwe okunamathiselwe futhiukuzibheka. Awufuni ukuhlukaniswa yi-Google ngenxa yezizathu zokungasebenzi. Ngaphambi kokwenza i-SEO, kubalulekile ukuthi ufunde okuyisisekelo kuyagwema ukuhlangabezana nezinkinga kumkhankaso wakho we-SEO. Isibonelo, izimo zokuhlaselwa kwe-website nokukhwabanisa manje sekuvamile. Kuyinkimbinkimbiukuhlaselwa yi-hacker enonya, nokulahlekelwa ukulawulwa kokuphepha kwewebhusayithi yakho.
Emuva ngo-2014, umbiko ukhululiwe wokuthi kunamawebhusayithi angaphezu kwezigidi eziyi-1i-Internet. Inombolo eningi yeqiniso. Ngenxa yokuthi i-dormancy, inani elibhalisiwe lamawebhusayithi lahla ngokushesha futhi lizinzile ngo-2015 ngokushaya994 million. Inani elihle labathengisi bokuqukethwe liphuma ku-SEO njalo ngenyanga ngenxa yokuhlaselwa kwewebhusayithi. Cishe u-1% wamawebhusayithi atholakalefuthi ziphazamiseke ngenxa yokungabi nalutho lweNkomba yeCompromise. Lokhu kufana namawebhusayithi ayizigidi eziyisishiyagalombili aphuma ebhizinisini ngenxa yokukhwabanisa.
Ngokuyinhloko, amawebhusayithi akwazi ukugonywa futhi afakwe igciwane ngenxa yezici ezilandelayo:
Ukutholakala kokuhlanganiswa kwezinkampani zangaphandle
Ukufinyelela ukulawula kusuka kumaqembu ahlukene
Ukulungiswa kwe-Vs Forensics
I-Forensics ibe se-SEO isikhathi eside. I-Forensics iyasiza ukuchazaindlela okwenzeka ngayo ukukhwabanisa okwenzekile, ngaphezu kwalokho, ngubani owenza ukukhwabanisa kwangempela. Ukulungiswa, ngakolunye uhlangothi, kuhlanganisa ukuthi izifo zingaba kanjaniisusiwe. Ukulungiswa akunakwenzeka ngaphandle kwe-forensics kanye ne-vice-versa. Ukulungiswa okulungile akukwazi ukufakwa ngaphandle kokuba khonaizibikezelo ezifanele.
Amabhizinisi amakhulu akakwazi ukwenza ngaphandle kwezinguquko. Ukuphepha kwewebhusayithi yakho kubaluleke kakhulu.Nazi izizathu ezibonisa ukuthi kungani udinga izibikezelo zenhlangano yakho ukukhishwa kwe-outdo nokutheleleka kwewebhusayithi yakho.
Uma kwenzeka ukwehliswa, udinga ubuchwepheshe bokuziphendulela ukuze uxazulule izivumelwano zakho ze-IR.
Ukuba yi-PCI ehambisanayo, nakanjani ngeke ukwazi ukwenza ngaphandle kwe-forensics.
Isifiso sokuqonda ukuthi kwenzeke kanjani ukuyekethisa.